BMW AYAA KAFAN LOOGA DHIGAY | allsanaag
BMW AYAA KAFAN LOOGA DHIGAY
Gaari qiimihiisu yahay 88,000 ayaa Kafan (coffin) looga dhigay markII xabaasha la geliyey
Nin maalqabeen ah oo ka soo jeeda Dalka Nigeria ayaa markii uu aabihiis dhintay wuxuu Kafan uga dhigay gaari cusub oo ka mid ah kuwa raaxada ee loo yaqaan BMW si u oofiyo balan qaad uu horay uga sameeyey Aabihiis.
Baraha Bulshada ay ku kulmaan ayaa la soo dhigay koox rag ah oo qof dhintay xabaal dhigaya , kaas oo ku jiray gaariga raaxada ee BMW oo qiimihiisu yahay 88,000- dollar tuulo lagu magcaabo Ihiala.
Qof, magaciisa ku sheegay oo qura Azubuike, ayaa aabihiis u balan qaaday inuu gaari u gadayo laakiin intaan gaariga loo gadin ayuu aabihiis dhintay. Intaa ka dib wuxuu go’aansaday inuu aabihiis Kafan uga dhigo gaarigan qaaliga oo uu xabaasha la galo.
Sidan oo kale sanadkii 2015 nin billionaire ah oo dalkan Nigeria ka soo jeeda gobolkiisa Enugu, ayaa hooyadiis oo dhimatay isaguna Kafan uga dhigay gaariga qaaliga ah ee Hummer.
Dadka Tuulooyinkaas nimankan kibray ku nool yihiin ayaa qaarkood waxay yiraahdeen ” Waxyaabaha noocan oo kale ah ayaa dadka madow ka dhigaya kuwo gaajoonaya oo faqri ah’, qaar kalena waxay yiraahdeen waa Fatooshnimo iyo isla weynaan. Dad ayaa hada leh markii xabaasha laga dareeay ayuu gaarigiisii la soo baxay
← SNM maalinta Ciidda maxay samayn doonaan? Soomaalida Neceb Midnimada Somaliya (SNM) →